We Fight We Win. -- " More than Media ": လျှုပ် စစ်မီး ရရှိ ရေး လှုပ်ရှား မှု စတင် နေ ပြီ
လျှုပ် စစ်မီး ရရှိ ရေး လှုပ်ရှား မှု စတင် နေ ပြီ
လျှပ်စစ်မီး ပုံမှန် ရရှိရေး တိုက်တွန်း လှုံဆော်သည့် ပိုစတာ ကို မီးရရှိရေး လှုံဆော်သည့် အဖွဲ့ များ မှ ဖြန့် ဝေ။
လျှပ်စစ်မီး အပျက်များနေသည့်ကိစ္စကို မကျေနပ်၍ မနက်ဖြန် (၂၀၊ ၅၊ ၂၀၁၂)၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ ည ၇ နာရီ မှစတင်ကာ ၂၆ (ဘီ) လမ်းနှင့် ၇၈ လမ်းထောင့်ရှိ တိုင်း EPC ရုံးရှေ့ (သို့မဟုတ်) ၆၂ လမ်း၊ မနော်ယမံဥယျာဉ်ရှေ့တွင် ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းပြီး လျှပ်စစ်မီး မှန်မှန်ရရှိရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆိုသွားကြမည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့တွင် သတင်းများ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေပါသည်။ ပြည် မြို့တွင် လည်း ဆန္ဒပြ မှု နှင့် မီးလှန့် သံချောင်း ခေါက်မှု
ထပ်မံ ပြု လုပ်မည် ဖြစ်သည်။
Electricity, gas and water fees are not free and not come cheap anywhere on this earth.
I wonder how people of Burma would settle for this fees. Can they?